Indlela esiFunda ngayo i-imeyile yokuSebenza iyatshintsha | Martech Zone
Indlela esiFunda ngayo i-imeyile yokuSebenza iyatshintsha
NgoMvulo, Oktobha 16, 2017 NgoMvulo, Oktobha 16, 2017 Douglas Karr
Kwilizwe apho kuthunyelwa i-imeyile ngakumbi kunangaphambili (ukuya kuma-53% ukusuka ngo-2014), ukuqonda ukuba zeziphi iintlobo zemiyalezo ethunyelweyo, kwaye xa loo miyalezo ithunyelwe iluncedo kwaye ibalulekile. Njengabaninzi kuni, ibhokisi yam engenayo ayilawuleki. Xa ndifunda malunga ibhokisi engenayo zero, Andinakukunceda ngaphandle kokuba nethemba elincinci malunga nevolumu kunye nendlela eziphendula ngayo ii-imeyile.
Ngapha koko, ukuba bekungekho SaneBox kwaye Imeyile yeButler (ndisebenzisa amakhonkco am okudlulisa apho), andiqinisekanga ukuba ndiza kuyiphatha njani i-imeyile yam. I-Sanebox yenza umsebenzi omangalisayo ekufundeni ukuba yeyiphi na i-imeyile efuna ingqwalaselo kwangoko kwaye iMailButler indinika ithuba lokulibazisa iimpendulo, ukusnuza ii-imeyile, kunye nokwenza ukuba i-Apple Mail inezinye izinto ezininzi.
Ngokufanayo kuwo omabini amaqonga kukuba ibhokisi yam engenayo ilawulwa phakathi kweefolda. Andikhawulelwanga kwi-Inbhoks, iFunk Junk, kunye noDoti kwakhona… ezi nkqubo zihambisa imiyalezo ngaphakathi nangaphandle kwezinye iifolda ezininzi. Ngelixa ezi zizixhobo ezikhulu kum, kufuneka zonakalise iimetrikhi ze-imeyile zabathumeli abazama ukufikelela kum. Ukuziphatha kwe-imeyile is Ukutshintsha, kwaye ezi zixhobo ngumzekelo omnye wendlela.
Ukuphanda utshintsho kwindlela yokuziphatha ye-imeyile, iReachMail kutsha nje kuvavanywe abantu abali-1000 ukuba bafunde ukuba kuthetha ntoni ukulawula iibhokisi zabo zebhokisi. Iziphumo eziphambili:
Imeyile yasekuseni - Iipesenti ezingama-71 zabantu baseMelika baqala ukukhangela phakathi kwentsimbi yesi-5 kusasa ukuya kweyesi-9 eNew York naseNew Jersey ngokomndilili itsheki yokuqala yokuqala — ngaphambi nje kwentsimbi yesithoba kusasa- nabantu base-Utah bajonga kwangoko, nje emva ko-9: 6 kusasa, ngokomndilili.
Imeyile yangokuhlwa I-30% yabantu baseMelika bajonge ngaphambi kwentsimbi yesi-6 kunye nama-70% emva kwentsimbi yesi-6: 46% yabantu baseVirginians abajonga i-imeyile yabo okokugqibela phakathi kwentsimbi ye-9 ebusuku nasezinzulwini zobusuku, ngelixa i-13% ngaphezulu igqiba emva kobusuku. Ayinakuphelelwa lixesha, iipesenti ezingama-71 zaseTennesse zizikhova zasebusuku kunye nabo, bejonga i-imeyile yabo emva kwentsimbi yesithoba, kunye neepesenti ezili-9 zokujonga okokugqibela ngaphambi kwentsimbi yesithandathu, ngaphantsi komndilili welizwe.
Ukuthumela ii-imeyile Phantse isiqingatha sabo bonke abantu baseMelika (46%) bathumela ii-imeyile ezingaphantsi kwe-10 ngosuku. Ngama-30% abantu abathumela ii-imeyile ezili-10 ukuya kwezingama-25 ngosuku, i-16% ithumele ezingama-25 ukuya kuma-50, ize i-8% ithumele ii-imeyile ezingaphezulu kwama-50 ngosuku. Amazwe asentshona aneyona avareji iphantsi yee-imeyile ezithunyelweyo, nge-18 ngosuku. Amantla mpuma ahamba phambili kuyo yonke imimandla kunye nomndilili ama-22 athumele ii-imeyile ngosuku, ngelixa iMassachusetts inesizwe esiphakamileyo see-imeyile ezingama-28 ezithunyelwe ngosuku, ngokomndilili.
Ixesha lokuphendula I-58% yabantu baseMelika bathi bayaphendula kwii-imeyile kwiyure enye. I-26% iphendula kwiyure enye ukuya kwezintandathu, iipesenti ezili-11 ziphendula kwisithuba seeyure ezintandathu ukuya kwezingama-24 zize ezi-5% zisele emva kweeyure ezingama-24, ngokomndilili. I-Virginians inika ingxelo ngeempendulo ezikhawulezayo ze-imeyile kunye nexesha lokuphendula elingaphaya kweeyure ezimbini. Abantu baseNew York, ngokumangalisayo, bakwinqanaba lokuhamba kancinci- iipesenti ezilishumi elinambini bathi banomyinge wosuku okanye nangaphezulu ukuphendula kwaye ama-12% athabatha ubuncinci iiyure ezintandathu.
Imeyile engafundwanga -Ngaphezulu kwesiqingatha sabantu baseMelika banee-imeyile ezingaphantsi kwe-10 ezingafundwanga kwiibhokisi zabo zomsebenzi. Ingxelo engama-26% inee-imeyile ezingaphantsi kwama-50 ezingafundwanga, i-13% inee-imeyile ezingafundwanga ezili-100 kunye ne-6% phakathi kwama-50 no-100. ngaphezulu kwe-imeyile ezingafundwanga ezili-29. IMidwest yeyona inembalwa, ngomndilili we-30.
I-ReachMail ivelise le infographic: Ibhokisi lemiyalezo engenayo yaseMelika 2: Ubalo ukubonisa utshintsho.
tags: Ibhokisi lemiyalezo engenayo yaseMelikaI-inbox yaseMelika 2imeyili amaxesha avulekileyoixesha lokuphendula nge-imeyilezingaphi ii-imeyileumthengisi weposifikelela ngeposiibhokisi yesaneukubalaimeyile ezingafundwanga
I-SEO: Iindlela ezi-5 zokuLungiselela uPhando lweOrganic kaGoogle